N'oge ahụ, Gmail dị ezigbo egwu, n'ihi na ya na ya, ngwaọrụ ndị ọzọ bara uru ga-adị. Ozi email a na-enye ndị ọrụ aka ịzụ ahịa ha, jikọta akụkọ dị iche iche ma soro ndị ọzọ kwurịta okwu. Ọ bụghị naanị akwụkwọ ozi, mana na kọntaktị na-echekwa na Gmail. Ọ na-eme na onye ọrụ ahụ anaghị enwe ike ịchọta onye ọrụ kwesịrị ekwesị ngwa ngwa, mgbe ndepụta nke ndị ahụ dị oke.
Mepụta email na gmail.com
Na afọ dijitalụ, ọ dị mkpa ka ị nweta ozi-e, n'ihi na enweghị ya, ọ ga-abụ nsogbu iji kpọtụrụ ndị ọrụ ndị ọzọ na Ịntanetị, hụ na nchekwa nke ibe na netwọk mmekọrịta na ọtụtụ ndị ọzọ. Otu n'ime ọrụ email kachasị ewu ewu bụ Gmail. Ọ bụ n'ozuzu ụwa, n'ihi na ọ na-enye ohere ọ bụghị naanị ọrụ ozi, kamakwa na netwọk mmekọrịta Google+, Google Cloud storage, YouTube, saịtị n'efu maka ịmepụta blog na nke a abụghị ndepụta zuru oke nke ihe niile.
Ịtọ Gmail na onye ahịa email gị
Nye ọtụtụ ndị, ọ na-adaba iji ndị ahịa ahịa pụrụ iche na-enye ohere dị mfe ịnweta ozi achọrọ. Ihe omume ndị a na-enyere aka ịnakọta akwụkwọ ozi n'otu ebe, ọ dịghị achọ ka ibu ọrụ weebụ dị ogologo, dịka ọ na-eme na ihe nchọgharị ọ bụla. Ịchekwa okporo ụzọ, nhazi akwụkwọ ozi, ịchọpụta isiokwu na ọtụtụ ihe dị maka ndị ọrụ nke onye ahịa.
Kọntaktị iPhone Kọntaktị na Gmail
Ndị ọrụ Apple nke ngwaahịa nwere ike ịnagide nsogbu nke kọntaktị kọntaktị na ọrụ Gmail, ma e nwere ọtụtụ ụzọ nwere ike isi nyere aka n'okwu a. Ọbụna ị gaghị etinye ụfọdụ mmemme ma nọrọ ọtụtụ oge. Ịtọ ntọala profaịlụ na ngwaọrụ gị ga-eme ihe niile maka gị. Nanị nsogbu nwere ike ime bụ ụdị na-ekwesịghị ekwesị nke ngwaọrụ iOS, ma ihe mbụ na mbụ.
Gbanwee paswọọdụ na email Gmail
Ọ na-eme na onye ọrụ chọrọ ka ị gbanwee okwuntughe site na akaụntụ Gmail ya. O yiri ka ọ dị mfe, ma maka ndị ahụ na-adịghị eji ọrụ a ma ọ bụ na ha bụ ndị ọhụrụ ọhụrụ, ọ na-esiri ike ịnyagharịa mkpokọta Google Mail interface. Ebumnuche nke a iji mee ka nkowa nke otu esi gbanwee nchikota nzuzo nke ihe odide na ozi E-mail.
Wepu aha na email na Gmail
Site n'iji ozi e-mail na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ọrụ site n'aka Google ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ịdenye ya na saịtị dị iche iche, n'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ịnweta ụba nke enweghị isi, ma na-abata ozi ịntanetị na-abata. Nke a nwere ike ịbụ mgbasa ozi, na-agwa maka mgbasa ozi, ego, "onyinye mara mma" na ozi ndị ọzọ na-abaghị uru.
Gbanwee adreesị ozi-e na Gmail
Ịgbanwe adreesị email gị na Gmail agaghị ekwe omume, dịka na ọrụ ndị ọzọ a maara Ma ị nwere ike ịdenye igbe ọhụrụ ọhụrụ ma degharịa ya. Enweghị ike iziga ozi dịka eziokwu na ọ bụ naanị na ị ga-amata adreesị ọhụrụ ahụ, ndị ọrụ ndị chọrọ iziga gị leta ga-ezute njehie ma ọ bụ zigara onye ọjọọ ahụ ozi.
Gmail paswọọdụ mgbake
Onye ọ bụla na-ahụ maka Ịntanetị nwere ọrụ dị ukwuu nke dị mkpa maka paswọọdụ siri ike. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ bụghị mmadụ nile nwere ike icheta ọtụtụ ihe dị iche iche nke igodo na akaụntụ ọ bụla, karịsịa ma ọ bụrụ na ha ejighị ha mee ogologo oge. Iji zere ịla n'iyi nzuzo, ụfọdụ ndị ọrụ na-ede ha na ọkwa mgbe niile ma ọ bụ jiri mmemme pụrụ iche ichekwa okwuntughe na ụdị ezoro ezo.
Gmail nwere interface mara mma, ma ọ bụghị maka ihe niile dị mfe ma dị omimi. Ya mere, ụfọdụ ndị na-eji ọrụ a eme ihe ma ọ bụ na edebanye aha ha mgbe ụfọdụ, nwere ajụjụ banyere esi esi na mail pụta. Ọ bụrụ, n'ụzọ bụ isi, netwọk mmekọrịta dịgasị iche iche, forums, ọrụ nwere bọtịnụ "Ọpụpụ" na ebe a ma ama, mgbe ahụ na Gmail ihe niile adịghị.
N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ọrụ ahụ chọrọ ihichapụ ozi-e na Gmail, ma ọ chọghị ikere òkè na ọrụ Google ndị ọzọ. N'okwu a, ị nwere ike ịchekwa akaụntụ ahụ n'onwe ya ma kpochapụ igbe ozi Gmail tinyere data niile echekwara na ya. Usoro a nwere ike ime n'ime nkeji ole na ole, n'ihi na ọ dịghị ihe siri ike na ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © Gmail 2020